Cunto: Dagaal iyo Ka-fogeynta Emaylada Emayl
Ganacsi kasta oo internetka ah ayaa la kulmaa weerarada spam ee mass. Dadka intooda badan isticmaala shabakaddamaalin walba waxay la kulmaan e-mail badan oo sheeganaya inay bixiyaan adeeg gaar ah. Spammers waxay bartilmaameedsadaa bogagga sare ee shabakadaha internetka, iyo sidoo kale wax badanmacluumaad kale oo faa'iido leh. Waagii hore, spammers waxay qaateen ereyo sir ah oo badan iyo macluumaadka shakhsiyeed, iyo sidoo kale dhinacyo kala duwansi loo hubiyo in website uu si habboon u shaqeeyo. Waxay sidoo kale keeni karaan e-ganacsi, taas oo horseedi karta khasaaro weyn oo e-ganacsi ah. Dhammaan SEOdadaallada ayaa hoos u dhigi kara weerarrada dhabta ah ee dhabta ah.
Ka fogaanshaha spam waxay noqon kartaa fikrad caqli gal ah gaar ahaan bogga cusub. Qofka weynMaamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare ,Jack Miller, wuxuu sharxayaa siyaabo dhowr ah oo loola dagaallamo lagana wareejiyo spam:
1. Isticmaal cinwaanka emailka ah oo sugan
Tallaabooyinka nabadgelyada ee bixiyahaaga internetka ayaa muhiim ah.Tusaale ahaan, waxay ka dhigan karaan dadka isticmaala saameynta khayaanadda ama inay kor u qaadaan shaqada spammers. Waa muhiim inaad tixgeliso isticmaalka amnigacinwaanka emailka. Gmail iyo Outlook waxay leeyihiin qaar ka mid ah cinwaanada emailka ugu caansan ee booska maanta. Kiisaska kale waxay xaqiijin karaan ilaalintakombiyuutarka adigoo isticmaalaya hababka difaaca ee ugu dambeeyay.
2. Cinwaanka emailkaaga ku xafid
Spammar kasta wuxuu ku bilaabmaa sameynta ururinta cinwaanada emailka badan..Kuwani waabartilmaameedyada ay soo geliyaan weerarrada spam. Waxaa jira farsamooyin farsamo oo kala duwan oo wax ka qabashada iyo kala soocida spam. Waxaad isticmaali kartaa email kala duwancinwaanada codsiyada kala duwan ee internetka. Waxaa intaa dheer, mar walba waxaa jira xulasho ah oo ay ku jiraan dhowr fure oo ku qoran cinwaanka emailkaaga hadda.Qiyaastan waxay ku sii hayn kartaa emaylka spam ee faylka aad si fudud u kormeeri karto, oo ha ku wareerin email muhiim ah.
3. Isticmaal faylasha spamka
Ka kor ku xusan, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo barta internetka ee bixiyaha emailka ah. Emailbixiyeyaasha sida Gmail waxaa ku jira faylasha spam kuwaas oo soo saari kara qaar ka mid ah weerarada spam ugu fiican. Fayladaha Spaka waxay ogaadaan oo ay u riixaan emails ay yihiinspam u dir faylka spam, halkaas oo aad awoodi karto inaad kala xalliso kuwaa iyaga kuugu adeegi kara.
4. Ha ku dhajin xiriirinta spam
Fikradaan, waxay cadeeyeen in emaylka spam ay ku jiraan URL badan oo kala duwanhawlaha. Dhammaan shaqooyinkan waxay ka socdaan dad sida hackers, kuwaas oo leh sababo la isweydiiyo ka dambeeya emails mass weeraro. Emailka spamwaxaa ku jira xiriiro kuwaas oo tilmaamaya meelo aad u xun. Waxay fulin karaan qaar ka mid ah hawlaha hack sida xakamaynta browserka dhibbanahain qalab casri ah oo qalab Linux ah.
Waxaa jira noocyo badan oo spam webka ka jira. Dad badan oo internetka isticmaala ayaa leh khibradmaalintooda maalin kasta. Emails oo ay ku jiraan spam ayaa ka imanaya dadka kale ee u nugul xaasidnimo iyo jirdil xun marka la eego dhibbanayaasha.Spam wuxuu kumanaan lacag kaash ah ka qaataa internetka aan waxba galabsan. Inaad ka fogaato spam waxay badbaadin kartaa e-commerce aad xasiloonida iyo sidoo kaleamniga shakhsiga macluumaadka macaamiisha. Qaar ka mid ah siyaabaha loola dagaallamo loona ilaaliyo spam waxay ku yaalaan tilmaamahan. Waxaad awoodi kartaa inaad xakameysonaftaada iyo sidoo kale ammaankaaga internetka ee spam. Waxaad sidoo kale awood u yeelan kartaa inaad ka fogaato spam ka fog goobtaada ama macaamiisha Source .